Chiitiko Chekugadzira | Xiamen Yasin Indasitiri uye Trade Co., Ltd.
● Fekitori yedu haina chete yakasimba solid technical simba, yakanakisa zvishandiso uye yepamusoro-giredhi chaiyo yekuyedza bvunzo michina asiwo yekutanga kirasi manejimendi.
● Sezvo chirevo chedu chiri kutora tekinoroji nyowani yekuvandudza mhando yezvigadzirwa, kuwedzera misika yedu nemhando yepamusoro uye kumisikidza chikwereti chedu nebasa rakanaka, takashinga mukugadzira, takazvipira mukuvandudza mhando uye tinoshuvira kugadzira zvigadzirwa zvegelatin.
● Mazuva ano anopfuura matani zviuru zvisere egelatin uye collagen pagore zvinozivikanwa mudzimba uye kupinda mumisika yepasi rose. Zvese zvigadzirwa zvinosangana neyakajairwa nyika uye standard indasitiri
Fekitori inoda ruzivo, kuverengera mhando yepamusoro uye gara uchigadzirisa yekugadzira mutsara. Izvo zvinogona kugadzira gelatin mutengesi nezvakawanda zvirinobuda uye chengetedza mutengo. Yedu ruzivo mainjiniya aripo kuti akushandire iwe yakanakisa gelatin yekushandisa kwako.
Kuti titi zvigadzirwa zvedu zvine mhando, isu zvakare tichava nechokwadi chehutsanana, kudzora kwebhakitiriya, kurongedza maitiro ave akanyatso kudzora. Zvigadzirwa zvedu zvine kushandiswa kwemaindasitiri echikafu, nzvimbo yemishonga, yekuwedzera indasitiri uye yekuzora nezvimwe izvo zvinoda kuchengetedzwa kwepamusoro kuona kuti hapana dambudziko rinobva pane zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro.
“Sarudzo Yako Yakanakisisa, Mutengesi Wako Wakavimbika!” isu tinogara tichipa zvigadzirwa zvedu zveyakagadzikana yakanaka mhando nemakwikwi mutengo, kukurumidza kuburitsa, basa rakanakisa uye kunakidzwa mukurumbira mukuru pakati pevatengi.